तेल अभिवमा पर्यटन यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | के हेर्ने, तेल अवीव
भूमध्यसागरको तटमा इजरायलको शहर हो तेल अवीव, देश मा दोस्रो जनसंख्या। २०० Since देखि विश्व सम्पदा हो यद्यपि राजनैतिक अवस्था इजरायलमा पर्यटनका लागि सबैभन्दा आकर्षक नभए पनि सत्य यो हो कि यसले हरेक बर्ष हजारौं पर्यटकलाई आउन रोक्दैन।
र यरूशलेमको पार, तेल अवीव एउटा शहर हो जुन भेट्न योग्य छ। यसैले हामी यहाँ केहि व्यावहारिक जानकारी छोड्दछौं के गर्ने र के गर्ने तेल टिव अभिवमा.
2 के तेल अवीव मा यात्रा गर्ने
3 तेल अवीवमा २ hours घण्टा
4 तेल अवीव getaways
यो २० औं शताब्दीको सुरूमा स्थापना भएको थियो र हिब्रूबाट यसको नामको अनुवाद हो वसन्त पहाड। केही समयको लागि यो राजधानी थियो, अस्थायी रुपमा र पछिल्लो खाडी युद्धमा इजिप्ट र इराकले बम पनि बनाए। यो यरूशलेमदेखि टाढा छैन, केवल 60० किलोमिटर हाइफाबाट मात्र 90 ०। यो गर्मी गर्मी र चिसो जाडो छ।
मैले माथि भनें यो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो किनकि यसले बौहोस वास्तुकला भवनहरूको धेरै रोचक समूह समावेश गर्दछ। विश्वभर यस्तै भवनहरू छन् तर तेल अवीवमा जत्तिकै कतै छैन जहाँ १ 30 s० को दशकमा नाजीहरूको जन्मबाट बच्न जर्मनीबाट बसाइँ सरेका यहूदीहरूको आगमनसँगै यस शैलीको विस्तार भयो।
के तेल अवीव मा यात्रा गर्ने
त्यहाँ छन् पाँच छिमेक सहरमा: तथाकथित व्हाइट सिटी, जाफा, फ्लोरेटिन, नेभ टेजेडेक र समुद्री तट। श्वेत शहर क्षेत्र हो जुन विश्व सम्पदा हो र तपाइँले यसलाई एलेन्बी स्ट्रिट र बिगिन र इब्न ग्भिरोल सडकहरू, यार्कन नदी र भूमध्यसागर बीच फेला पार्नुहुनेछ। सबै भवनहरू सेता छन्, स्पष्ट रूपमा, र समयको साथ पुनर्स्थापना गरियो।
तपाईं रोथस्चिल्ड बोउलेभर्डको साथमा टहलिन पर्छ, यसको सुन्दर किओस्कहरूको बीचमा र यसको शान्त क्याफेहरू र पसलहरू। साथै Sheinkin Street, जो तेल अवीवको प्रतीक हो, यसको पुरानो स्टोर, गहना र क्याफेहरूको साथ। यो एक अत्यावश्यक छिमेक हो।
Jaffa तेल अवीवको दक्षिणमा छ र छ पुरानो पोर्ट त्यो समय को माध्यम बाट बढेको छ। यो यसको पुरानो हावाको लागि आकर्षक छ, यसको फ्वा बजार, यसको सडकहरू र यहूदी र अरब संस्कृतिहरूको अविवादित मिश्रणको लागि। बन्दरगाह पनि यसको सानो डु boats्गा र यसको रेस्टुरेन्ट र क्याफेहरू र यसको बजार र तेल अवीवबाट टाढाको दृश्यहरूको साथ राम्रो ठाउँ हो।
फ्लोरेटिन यो दक्षिण तर्फ पनि छ र यो केहि यस्तो हुनेछ तेल अभिवमा सोहो। यो पुरानो छिमेक हो कि यद्यपि यो समयसँगै परिवर्तन भएको छ, यति खास परिवर्तन भएको छैन। यो एक गरीब हिस्सा हो र आवश्यक छ यदि तपाईं विरोधाभास हेर्न चाहनुहुन्छ भने। तपाईं यसको ग्रीक, टर्की र रोमानियन उत्पादनहरूका साथ लेभिंस्की मार्केटमा हिंड्न सक्नुहुनेछ, र यदि तपाईंले रात बिताउनुभयो भने त्यहाँ सस्तो बारहरू हुन्छन् र केन्द्रका मानिसहरू सामान्यतया आउँदछन्।
नेभ टेडेडेक यो पनि एक हो तेल अवीव को सब भन्दा पुरानो जिल्लाहरु तर उहि समयमा यो धेरै फेसनशील भएको छ र धेरै बहाल गरिएको छ। यो १ th औं शताब्दीको अन्त्य हो र जाफाह बाहिर पहिलो यहूदी छिमेक थियो। योसँग साँघुरो सडकहरू, धेरै प्राच्य वास्तुकलाहरू, ग्यालरीहरू, बुटीकहरू, डिजाइनर पसलहरू र छायादार प्याटोहरू सहित रेस्टुरेन्टहरू छन् जहाँ यो पेय पदार्थहरू रोक्न लायक छ।
अन्तमा, त्यहाँ छ तेल अवीव समुद्र तट त्यो शहरको पश्चिम तटमा माईलहरूको लागि थिचिएको छ। यो छ सबैभन्दा लामो भूमध्य समुद्र किनार मध्ये एक र गर्मी मा यो विशेष गरी पर्यटक र स्थानीयहरु को भीड छ जो यसको न्यानो पानी को लाभ लिन आउँछ। धेरै व्यापक भएको कारण सबैका लागि ठाउँ छ। हिल्टन होटेलको समुद्र तट पनि समलि beach्गी समुद्र तट पार उत्कृष्टताका रूपमा परिचित छ र गोर्डन-फ्रिश्मान समुद्र तट फेसनल बैठक पोइन्ट हो। यहाँ केरा बिच, डल्फिनारियम र अल्मा बीच पनि छ।
तेल अवीवमा २ hours घण्टा
के तपाईं यरुशलममा हुनुहुन्छ र तेल अवीभको लागि उम्कन चाहानुहुन्छ? त्यसोभए तपाईंले थोरै तालिका बनाउनु पर्छ, चाँडै छोड्नुहोस् र फाइदा लिनुहोस्। यदि तपाइँ ग्रीष्म goतुमा जानुहुन्छ भने तपाईं समुद्र तटमा केही घण्टा खर्च गर्न लाग्नुहुन्छ त्यसैले तपाईं पोर्टको मजा लिन जाफमा सुरु गर्न सक्नुहुनेछ, समुद्री किनारामा ब्रेकफास्ट गर्नुहोस् र हिंड्नुहोस्। नेभ ताजेडेक अर्को ढोकामा छन् त्यसैले तपाईं यसलाई टुरमा थप्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ खाजा खान सक्नुहुन्छ।
दिउँसो तपाईं समुद्री किनारको रमाईलो लिन वा धेरै मध्ये एउटामा जानको बीच बीचमा रोज्न सक्नुहुन्छ तेल अवीव संग संग्रहालयहरु: यहूदीहरूको संग्रहालय, इजरायलको भूमिको संग्रहालय, मूलतः पुरातात्विक संग्रहालय, Bauhaus संग्रहालय (नोट गर्नुहोस् कि यो हप्तामा दुई दिन मात्र बुधबार र शुक्रवार खुल्ला छ), तेल अवीव हिस्ट्री संग्रहालय, अझ्रीली वेधशाला जहाँबाट तपाईं शहर र 50० किलोमिटरको तटरेखा देख्न सक्नुहुनेछ, यो पनि नि: शुल्क छ! महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वा कलालाई समर्पित संग्रहालयहरू।
र राती शहर छaमहान रात जीवन त्यो बिहान सबेरै रहन्छ। तपाईं खाजामा जान सक्नुहुन्छ र त्यसपछि नाच्न वा बारमा बाहिर जान सक्नुहुन्छ किनकि यी ठाउँहरू मात्र मध्यरात्रमा भरिन्छ।
तेल अवीव getaways
यदि तपाईं एक रात तेल अवीवमा बस्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले दोस्रो दिनको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ दिन यात्रा, getaways। मसाडा मेरो लागि यो याद नहुने पहिलो भ्रमण हो। यदि तपाईं 40० बर्ष भन्दा माथिसम्म हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई मलिडा भनिने हलिउड क्लासिक याद आउँछ।
यो पहाडमा मरुभूमिको किल्ला र दरबारहरूका भग्नावशेषहरूको नाम हो, जसले लामो समयसम्म रोमीहरूको आक्रमणको प्रतिरोध गर्‍यो, अन्तमा उनी मारिए र यसका बाँचेकाहरूले सामूहिक आत्महत्या गरे जसको लागि उनीहरूलाई शहीद मानिन्छ। यो पनि विश्व सम्पदा.
तपाईं मसाडा भ्रमण गर्न र गर्न सक्नुहुन्छ मृत सागर भ्रमण उही समयमा, उदाहरण को लागी। तपाइँले भ्रमण पनि थप्न सक्नुहुन्छ आइन गेदी ओएसिस, पैदल यात्रामा जानुहोस् र निजी मृत सागर समुद्री तटमा पर्खनुहोस्। वा पनि, पेट्रा भ्रमण गर्नुहोस्, छिमेकको जोर्डनमा। जे होस्, यसले विमान यात्रा समावेश गर्दछ। तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ सिजरिया र गालील भ्रमण गर्नुहोस्, यदि तपाईं पछिल्लो केसमा बाइबलको ईतिहासमा रुचि राख्नुहुन्छ किनभने यस भ्रमणमा भ्रमण पनि समावेश छ नासरथ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » तेल अवीव » तेल अवीवमा पर्यटन